Iindaba eziphezulu zeVolkswagen Touareg - Imbali kunye neyona ndlela iyingqayizivele
I-Pros & Cons: Iimpawu eziqhelekileyo zeTouareg
I-Touareg yi-Volkswagen yokuqala ye-volkswagen ezine-wheel drive ye-SUV yoluntu jikelele, kwaye yakhiwe ukuba ibe yinkokheli kwi-design ye-SUV. Ukwaziswa ngo-2004, i-Toureg ye-2½ yeetoni iyinkohlakalo enzima kwimarike yezemidlalo.
Yintoni eyenza iTouareg iyingqayizivele?
Umqulu wokumisa umoya (umgangatho kwi-V-10 version, ukhetho kwezinye iinguqulelo) ngokuzenzekelayo uphakamisa okanye unciphise isithuthi ngokuxhomekeke kwiimeko zendlela kunye nesantya oqhuba ngayo. Iyakwazi ukusebenziswa ngesandla.
Iza kunye ne-4Motion-wheel drive-wheel drive yoshicilelo "ekwahlukileyo phakathi kwe-front and backs axles. Iyakwazi kwakhona ukutshintsha ukuya kwi-100% yamandla ukuya ku-axle, kuxhomekeke kwiimeko zendlela. Ngaphezu koko, kubandakanya ukuhla kwe-low-gearing kwi-off-roading.
Yileyokuqala i-SUV ukunikezela ngeenjini ezimbini ezineesilinda ezingaphezulu kweesibhozo.
Iza kunye neNkqubo yeMpendulo ye-Intelligent Crash Response System yeVolkswagen, evulela ngokuzenzekelayo iingcango kwi-collision, inqamle ibhetri, ikhuphe ukunikezelwa kwamanzi kunye nezinto eziphezulu zamandla kagesi, ize ibize i-OnStar kwiinqwelo ezixhomekeke kuloo ndlela.
Ukuqhathaniswa neeyunithi ezine-4 kunye ne-5-speed, i-Transare ye-6-speed-transmission transmission iyathuthukisa ukukhawuleza kunye noqoqosho lwamafutha ngelixa kunciphisa ukukhutshwa.
I-speed-6 ezenzekelayo ziza kunye neendlela eziqhelekileyo zokuhamba kunye ne "mod shift".
Into emangalisayo kukuba uTouareg uyakwazi ukulawula ukuhamba ngokuhamba ngokukhululeka. I-SUV ye-luxury engakwazi ukujongana nayiphi na into oyiphononayo kuyo, nangona iyakhiwe kwinqonga engabonakaliyo.
Zonke iimodeli zinika iindlela ezincinane zokuhamba kunye nokuhamba kwee-angeli ezingama-28, ezigqibeleleyo zokuhlaselwa.
Ukongezelela ngobuqili kummandla wekhonsole yendawo yilawutsha etshayelweyo. Kubukhulu besigarethi sothuthi sithuthi sakho kwaye sibonelela ngokukhawuleza malunga nemizuzu engama-13.
I-Touareg iphinda ifike kunye "nokuphakama kwentaba" kunye neemeko "zokuzala". Uphawu lokumisa lukugcina ukuba ungagqithanga emva kwexesha xa ungekho kwiibhuleki, ngelixa umgangatho wezityalo uvumela ukuphuka, ukuhla kwehla kumanqanaba athile ngaphandle kokuqhekeka.
Nangona ezininzi iinkqubo zokuhamba ngeenqwelo zithuthi zingakunceda ukuba ufumane ukuphuma okusemgwaqweni omkhulu, i-Touareg iya kukunceda ufumane indlela obuyela kuyo apho uqale khona. Oku kuza ngokunyanisekileyo xa usuka endleleni.
Iinkonzo: Izizathu ezifanelekileyo zokuba ne-VW Touareg
Umqhina: Izinto ezimbi kakhulu malunga neVW Touareg
IVolkswagen Touareg ikhululekile nakwezinye izinto. I-VOLKSWAGEN OF AMERICA I-Pros & Cons: Iimpawu eziqhelekileyo zeTouareg I-Touareg yi-Volkswagen yokuqala ye-volkswagen ezine-wheel drive ye-SUV yoluntu jikelele, kwaye yakhiwe ukuba ibe yinkokeli kwi-design ye-SUV. Ukwaziswa ngo-2004, i-Toureg ye-2½ yeetoni iyinkohlakalo enzima kwimarike yezemidlalo.
Nantsi uluhlu lwezinto ezikhethekileyo zeTouareg abaninzi abanokucinga ukuba ziphakathi kwezizathu eziphezulu zokuba ne-Volkswagen Touareg:
Awuyiyo ye-SUV ye-entry-level ye-SUV, i-Touareg ibona ubuchule obukhulu bokungena kwi-SIB.
Iza ngokupheleleyo ilayishwe ngokubanzi kwiinkalo eziqhelekileyo.
Iphakheji e-Extreme Offroad ibonisa ipakethe yokumiswa kwomoya ukuze kulungiswe ngaphezulu komhlaba, ii-angles zokuhamba eziphezulu (ukufikelela kuma-degrees angama-34), ukunyuswa kokunyuswa kokunyuswa, izitya ezongezelelweyo zeetripati kunye namanye amathayi anonya.
Yenzelwe ukuba kube lula ukuqhuba ukuqhubela phambili kuninzi.
Ulawulo luchanekile kwaye lukhawuleza. Ngaphandle kokujika ngokukhawuleza, kukho umzimba omncinci kakhulu.
Iphakheji ekhethekileyo yokumisa umoya inikezela umqhubi wokuphakama kweendlela eziphakamileyo (ukuya kwi-11,8 intshi yomhlaba) ukuze ukhethe - ngokuzenzekelayo okanye ngesandla. Ingumgangatho kwi-V-10 version, kwaye ixabise iindleko kwezinye iinguqulelo.
I-Touareg ipakisha iinkcukacha eziqinisekisiweyo ezisemgangathweni kunye nemilinganiselo emithathu yokukhiya.
Iza kumgangatho oqhelekileyo ngokulawulwa kwemozulu ngokuzenzekelayo.
Kulula ukulayisha izinto kwindawo yangasemva yempahla, ngenxa yokuvula ephantsi, ukuvula ukuvula.
Isistim somsindo esithethiweyo sesistim se-10 sisisetyenziswa ngokuqhelekileyo eTouareg.
Ukuqwalasela kakuhle iinkcukacha: Kukho izixhobo zamandla angama-12-volt kulo lonke u-Touareg, kunye neendawo zokugcina indawo.
Ingaphakathi elityebile ngeejiji ezilula kakhulu ukufunda nokulawula ezilula ukuyisebenzisa.
Inkqubo yokuhamba imimandla ekhethekileyo ye-offroad, kubandakanywa isikrini esingabonakaliyo esibonisa ukuphakama, ubude kunye nobubanzi, isikhundla samasondo angaphambili, ikhampasi kunye nesimo seempawu zokuvala.
Ukukhwabanisa okungaphezulu kwama-7,716-pound ngaphezu kwamanye ama-SUV ( midlalo ye-4Runner , i- Jeep Grand Cherokee , iDodge Durango, i-Ford Explorer ne-Chevy TrailBlazer).
Kukhona indawo engaphezulu kwaneleyo yangaphakathi kubaneenqwelo ezi-5 ezineendawo ezininzi zomlenze kubini nabaphambili beendawo zokuhlala, kunye nesitulo samandla esiqhubi sinikezela utshintsho ukuze lube naluphi na ubungakanani bomzimba.
Iiphakheji zokumiswa kwamanqanaba afanelekileyo ziquka i-compressor ye-airboard ebhodini enokuthi ithinte i-sppare, xa iTapareg iphinda ibe neenkqubo zokubeka esweni.
Ukongeza kwi-brakes disc-lock ezine-wheel-lock, i-Touareg ihamba neepakethe ezinqabileyo ezibandakanya i-front-brist Brego Breakes, ekhokelela ekuqhubheni ngokukhawuleza okungenakwenzeka ukuba kuphele, kunye ne-BrakeAssist, i-Electronic Brakeforce Distribution, kunye nokulawula ukuzinza .
Ukutyelela kunye nokukhwela kwayo kufana neminye yezinto ezinobuncwane.
Kukho izinto ezininzi ezipholileyo, awuyi kuziva uhlawule ngakumbi ukuhlawula le SUV kunabanye kwiklasi efanayo.
IVolkswagen Toureg ikhululekile nakwezinye izinto. I-VOLKSWAGEN E-AMERICA Izinto ezintle malunga nokuba ne-VW Touareg Nolu luhlu lwezinto ezikhethekileyo zeTouareg ezininzi eziza kuthathwa njengezona zizathu eziphezulu zokuba ne-Volkswagen Touareg:
Ukukhwabanisa okungaphezulu kwama-7,716-pound ngaphezu kwamanye ama-SUV (midlalo ye-4Runner, i-Jeep Grand Cherokee, iDodge Durango, i-Ford Explorer ne-Chevy TrailBlazer).
Nalu uluhlu lwezinye izinto ezintle kakhulu zeTouareg (ezinye ezinkulu, ezincinci) ezinokuthi zichaphazele isigqibo sakho UNGAKHO ufumane iVolkswagen Touareg:
Kwiindawo ezinqabileyo zendlela, indlela yokuhamba iyakwazi "ukudideka" kwaye inikezele ngedatha engafanelekanga, nangona ithola ngokukhawuleza ize ilungise iimpazamo zayo.
Ukuphakama kwedeshibhodi kunokunciphisa umboniso ongaphambili wokuqhuba abancinci.
Kubiza kakhulu kunezinye i-SUV kwiklasi.
Akukho khetho lokuhamba ngevili elinesibini.
Iza kunye nokude okude ukuvula iminyango. Iqhosha kufuneka ligcinwe phantsi ixesha elide ngokungavumelekanga ngaphambi kokuba iqhosha livuliwe.
Ushintsho lwe-disk-diski ye-multi-disk ekhethiweyo ikhona kwindawo yangasemva yempahla, kunokuba kudeshibhodi.
Umthamo we-Cargo uyingqinamba - ii-cubic feet ezinama-cubic kunye nezihlalo ezingama-71 xa zidibene.
Ngokungafani kwamanye ama-SUV, i-back back seats do not reline.
I-Touareg ayinikezeli uluhlu lwesithathu lwezihlalo, ukunciphisa ukuhlala kwabagibeli abahlanu.
Izihlalo ezingemuva zihla phantsi, kodwa kungekhona ngokulula, kwaye kufuneka ususe i-headrests.
Iimithombo zamasondo ezinjengezintlu eziphezulu zimi kwindawo evulekileyo emnyango, zifuna ukuba abagibeli abahamba phambili baqaphele ukungena nokuphuma.
Uqoqosho olubi kakhulu.
Ayikho iqhosha elihlukile "elivaliweyo" kwi-zone-control zone ye-automatic control zone.
Inkqubo yokuhamba nge-CD isekelwe kwi-CD, nangona i-CD enye ihlanganisa i-continental US
IVolkswagen Toureg ikhululekile nakwezinye izinto. I-VOLKSWAGEN YASE-AMERICA Izinto ezimbi malunga ne-VW Touaregs Nalu uluhlu lwezinto ezintle kakhulu zeTouareg (ezinye ezinkulu, ezincinci) ezinokuthi zichaphazele isigqibo sakho UNGAKHO ufumane iVolkswagen Touareg: